Tencent သည်ကြီးမားသော ကိုယ်ပိုင် သုတေသန လုပ်ငန်း အတွက် အပြည့်အဝ cloud ပေါင်းစည်း မှုကို ပြီးစီး သည် - Pandaily
Tencent သည်ကြီးမားသော ကိုယ်ပိုင် သုတေသန လုပ်ငန်း အတွက် အပြည့်အဝ cloud ပေါင်းစည်း မှုကို ပြီးစီး သည်
Jun 16, 2022, 17:11ညနေ 2022/06/16 23:30:48 Pandaily
Tencent Cloud သည် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်၎င်း ၏အတွင်းပိုင်း ကိုယ်ပိုင် သုတေသန လုပ်ငန်း အများစုသည် တိမ်တိုက် ပေါ်တွင် လုံးဝ ရှိနေသည်။ဆိုလိုသည်မှာ QQ, WeChat, Tencent Video နှင့် King Glory အပါအ ၀ င် Tencent ၏အတွင်းပိုင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို အများ သုံး cloud model ကို အခြေခံ၍ ဖွံ့ဖြိုးပြီး လည်ပတ် လိမ့်မည်။
သုံး နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း Tencent Cloud ၏ ကိုယ်ပိုင် သုတေသန လုပ်ငန်း သည် cores သန်း ၅၀ ကျော်လွန် ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ် မှာယွမ် ၃ ဘီလီယံကျော် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ၄၆. ၈ သန်း) ဖြစ်သည်။ Tencent Cloud & Smart Industry Business Group မှ အကြီးတန်း အမှုဆောင် ဒု ဥက္က president ္ဌ နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Tang Daosheng က “Tencent သည် Cloud ပေါ်တွင် ကြီးမားသော ပြည်တွင်း စီးပွားရေး ကိုတည်ဆောက် ခြင်းအားဖြင့် Tencent သည် အနာဂတ် ကို ဦး တည်သည့် နည်းပညာ ဗိသုကာ နှင့် R & D ယဉ်ကျေးမှု ကိုတည်ဆောက် ရန်ကူညီ သည် သာမက Tencent Cloud ၏ ထုတ်ကုန်များ၊ နည်းပညာ များနှင့် ဘက်ပေါင်းစုံ ၀ န်ဆောင်မှု စွမ်းရည် များကိုပိုမို ပြည့်စုံစွာ ပြုပြင် နိုင်ပြီး စစ်မှန်သော စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြု လိမ့်မည်။”
2018 ခုနှစ်တွင် Tencent “open source ပူးပေါင်း” နှင့် “cloud self-research” ၏အဓိက နည်းပညာ မဟာဗျူဟာ နှစ်ခု ကိုရှင်းလင်း ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကော်မတီ တစ်ခု တည်ထောင်ရန် ၎င်း၏ အလုံးစုံ မဟာဗျူဟာ အဆင့်မြှင့်တင် စတင်ခဲ့သည်။ လူမှုရေး၊ ဂိမ်း များ၊ အကြောင်းအရာ များနှင့်အခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များအပါအ ၀ င် Tencent Group ၏ကြီးမားသော ကိုယ်ပိုင် သုတေသန လုပ်ငန်းကို Cloud သို့ပြောင်းရွှေ့ ရန်ဖြစ်သည်။
၂၀ ၂၀၊ ဇန်နဝါရီလတွင် Tencent သည် QQ ကို Cloud သို့ ရွှေ့ပြောင်း ခဲ့သည်။ အများပြည်သူ သုံး မို clouds ်း တိမ် များ ၏မူလ ဒီရေ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မတူဘဲ QQ သည် ရုတ်တရက် အလွန် ပြင်းထန် ပြီး မို clouds ်း တိမ် ၏ ရုတ်တရက် တုန့်ပြန်မှု လိုအပ်ချက် များမှာ ပိုမိုမြင့်မားသည်။ QQ အဖွဲ့သည် network interoperability ပြ the နာကိုဖြေရှင်း ခဲ့သည်။ WeChat နှင့် QQ တို့တွင် မတူညီသော ဖွံ့ဖြိုးမှု မူဘောင် များရှိပြီး WeChat သည် QQ ထက် သုံးစွဲသူ ပိုများ သောကြောင့် Cloud သည် WeChat အတွက် QQ ထက် ပို၍ ခက်ခဲသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Coolpad နှင့် Tencent Cloud တို့သည် operating system lab သဘောတူညီချက် ကိုရရှိ ခဲ့သည်
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို ဦး စား ပေးသော စီးပွားရေး သည်တရုတ်နိုင်ငံ ၏အဓိက နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ များအတွက် တိုးတက်မှု အသစ် တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ် အတွက် Canalys မှ ထုတ်ပြန်သော China Cloud Computing Market Research မှ အချက်အလက်များအရ Alie Cloud ၊ Huawei Cloud ၊ Tencent Cloud နှင့် Baidu Smart Cloud တို့သည် ၃၆. ၇% ၊ ၁၈% ၊ ၁၅. ၇% နှင့် ၈. ၄% အသီးသီး ဖြင့် ထိပ်ဆုံး လေး နေရာတွင်ရှိသည်။